အော်ပီကျယ်၏ ကူ၍တွန်းပေးကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အော်ပီကျယ်၏ ကူ၍တွန်းပေးကြပါ
Posted by manawphyulay on Sep 24, 2011 in Community & Society, Events/Fundraise, Society & Lifestyle | 11 comments
“ ကူု၍တွန်းပေးကြပါ ”
” Help To Move ”
Cartoonist Aw Pi Kyeh
Date : 1st October (Saturday)
Venue : Myanmar Fisheries Federation, Bayintnaung Road, West Gyogone, Insein Township, Yangon.
ထိုင်း၊ ဂျပန် တို့မှာတော့ ရေချိုးခန်းမှာ ကောင်မလေးကို ဂျီးကူတွန်းခိုင်းရင် ပိုက်ပိုက်အတော်ကုန်သဗျ။ မြန်မာပြည်မှာ အခမဲ့ဆိုတော့ နိုင်ငံဂျားသားတွေ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ်ကို နားမလည်နိုင်တာလဲ မပြောနဲ့လေ..။
အင်း အခမဲ့တောင် မြန်မာလူမျိုးတွေက ပညာကို တန်ဖိုးထားရမှန်းမသိဘူးလေ။ စိုင်းစိုင်းတို့လိုပွဲမျိုး ၅ သောင်းဆိုလည်း သွားကြတာ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုးရှင့်။
မင်းတို.လက်တွေ လေထဲကိုမြှောက်ထားလိုက်…(ကဲ..ဘာမှမကျန်ဘူး ဆိုတာတွေ.ပြီမလား)
a thay lay says:
ဖိုရမ်တွေမှာ တင်ရင် ဘယ်သူမှ ၀င်မဖတ်ကြပါဘူး။ ကျွန်မ တင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်း ကျွန်မကိုယ်ကျိုးအတွက် တစ်ခုမှမပါပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က အားတဲ့အချိန် အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပဲတင်တာ။ တစ်နေ့ ၂ ခုပြည့်ရင်ပြီးရော လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေခဲ့တာတစ်ခုမှမပါသေးပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းညှိနေရင်လည်း သဂျီးအပါအ၀င်ရွာသူရွာသားအပေါင်း ပြောမှာပါ။ ဖိတ်ခေါ်စာတွေက ကျွန်မ ဟောပြောတာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်း ဗဟုသုတ ရစေမယ့်အကြောင်းအရာကိုပဲ ကျွန်မ အရင်ဆုံးစဉ်းစားလုပ်တာပါ။ သူများလည်းအကျိုးမရှိတဲ့အရာကို ကျွန်မရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို ဒီပွိုင့်လေးနဲ့ လဲလှယ်တယ်ဆိုရင်တော့ မှားမယ်လို့ပြောပါရစေ။ ကျွန်မရေးနေခဲ့တာ ပွိုင့်မသတ်မှတ်ခင်ကတည်းကလို့ထင်မိတာပါပဲ။ နက်နဲ့ ငွေကြေးအဆင်ပြေတဲ့အချိန် ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးပြီးရောဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးအရင်ထဲကလည်း မရှိဘူး။ ခုလည်းမရှိဘူး။ နောက်လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ပွိုင့်မပေးတဲ့ ဖိုရမ်တွေအတော်များများမှာလည်း စာရေးပါတယ်။ လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။
Events/Fundraise Category ကို နောက်ဆို. ပွိုင့်နည်းနည်းပိုပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်..။
အဲဒီ Category လိုက်ပွိုင့်မတူတဲ့စံနစ်စမ်းနေတာအဆင်ပြေရင်.. ပြောင်းမှာပါ..။
Events/Fundraise တခုထည်းရွေးရင်.. ပွိုင့် ၆၀ ဖြစ်မှာပါနော..။
မန်းတာမှာ..သူများပို့စ်..စာလေးသေချာဖတ်ပြိး. စာေ၇းသူစိတ်ကလေးလည်း မြင်အောင်ကြည့်မန်းစေချင်တာပါ..။
တခါတခါ.. တကြောင်း၂ကြောင်း ၀င်ရေးလိုက်ရင်.. တခြားသူတော့မသိ.. ကျုပ်တော့..ပိဿလေးမြင်ရသလို.. လန့်လန့်သွားတယ်..။
ုမနော လေး ကို မပြောကြပါနဲ့ ဗျာ သူ အခုလို တင် နိုင်တာ ကို ကလေးစားစရာ ပါ ပွိုင့် လို ချင်လို့ ဆို တာ ဘယ်သူ့ ကို မှမထင် သင့်ဘူးထင်ပါတယ် ထင် နေတဲ့သူတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်နဲ့အင်တာနက် သုံးလို့ ကုန်တဲ့ ငွေ က ပွိုင့်ရတာထက် အများကြီး ပို ပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ် ကျွန်တော်ဆို post တခုပဲတင်ဘူးသေးတယ် အားပါးပါး မလွယ် ဘူးဗျ
ပြီးတော့ မနော တင်တဲ့ post ကလည်း မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် တော့ တော် တော် အကျိုး ရှိပါတယ်
အဲဒီနေ့က စာပေဟောပြောပွဲမလုပ်ဖြစ်ဘဲ ပျက်သွားတယ်တဲ့
ပန်ပန်ရယ်… မမ ပြန်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ ကြေငြာဝင်တယ်ပြောမှာစိုးလို့ ဘာမှမပြောတော့တာပါ။ တစ်ခါတလေ စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ အရမ်းနာရပါတယ်။ ဒီတော့ လူတိုင်း မသိသေးတဲ့အရာကို မျှဝေတာ အမြင်တစ်မျိုးနဲ့မြင်လာတဲ့အခါ ဘာမှကို မရှင်းပြချင်လောက်အောင်ဖြစ်မိတယ်။ စာရေး စာဖတ်တဲ့ ၀ါသနာကလည်း ဘယ်လိုမှတားလို့မရတဲ့ ကိုယ့်စိတ်လည်း ကိုယ်သိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းရိုင်းတယ်လို့ မထင်ချင်ပါဘူးလေ…. လူတိုင်းမှာ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ စာရေးသားနေတယ်ဆိုတာလည်း နားလည်မိပါတယ်။
ဒီရွာမှာ ဘယ်သူကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငွေလိုချင်လို့ေ၇းနေတာလို့ ပြောရင် ပြောတဲ့သူကို ကန့်ကွက်ရလိမ့်မယ် …
ပိုစ့်တစ်ခု တင်ရင် ၃၀၀ ၇ဖို့ မသေချာဘူး . ဒါပေမယ့် ပိုစ့်တစ်ခု အတွက် အင်တာနက် တစ်နာရီလောက် အချိန်ပေးရင် ပေးရလိမ့်မယ် . ဒီရွာက standard ရှိလို့ စာရေးနေတဲ့သူတွေ များတာပါ။ ငွေကြောင့်လို့ ထင်ရင် မှားလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်သိန်းရရင် မယူဘူးလားဆိုတော့ ယူမှာပေါ့ ။ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန် လုပ်အား ဦးဏှောက်ကိုရင်းပြီးမှ ရတဲ့ငွေမို့လို့ပါ. ဒါပေမယ့် တစ်သိန်းဆိုတာကို မျှော်မှန်းပြီးတော့ ရေးနေကြတာတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားစေချင်တယ်။ လူတိုင်းလဲ ဒီလိုပဲ နေပါလိမ့်မယ် …